အာဖရိကဖောက်သည်အတွက် 1PTH ကြက်အစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကိုသတ်မှတ်ပါ
မတ်လတွင် ,VICTOR တောင့်စက်သည်အာဖရိကစားသုံးသူအတွက်ကြက်အစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကိုကမ်းလှမ်းထားသည်,အရာတည်ရှိသည် Mozambique.it ရဲ့အဓိကအားဖြင့်ကြက်သားအစာကျွေးတောင့်နှင့်နွားအစာကျွေးတောင့်ထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်.
1.အစမှာ, တိရိစ္ဆာန်များအတွက်လိုအပ်သောကုန်ကြမ်းများသို့မဟုတ်အစာထည့်သည့်အစိတ်အပိုင်းများကိုကြိတ်ခွဲစက်မှတစ်ဆင့်ဖုန်မှုန့်များအဖြစ်ကြေကွဲစေသည်, ပဲပုပ်မုန့်ညက်လိုပဲ, ပြောင်းဖူး, ဂျုံ, ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အခြားပစ္စည်းများ
2.ထိုအခါ, အဆိုပါရောစပ်စက်၌တည်၏, ကြိတ်ခွဲထားသောကုန်ကြမ်းအမှုန့်များသည်နောက်ပိုင်းတွင်လုံးလေးများထုတ်လုပ်မှုအတွက်လုံးဝရောစပ်ထားသည်. ဒီဖြစ်စဉ်၌, အသုံးပြုသူသည်ဗီတာမင်များကဲ့သို့သောအပိုပစ္စည်းများကိုထည့်နိုင်သည်, အမှုန့်, အရိုးနှင့်အခြားလိုအပ်သောသဲလွန်စဒြပ်စင်
3.နောက်တစ်ခု, အဆိုပါရောနှောကုန်ကြမ်းပေါ်ကိုမှတဆင့်ကြက်အစာကျွေးတောင့်စက်စက်ထဲသို့ဝင်. စက်အတွင်း၌မြင့်သောအပူချိန်နှင့်မြင့်မားသောဖိအားအောက်မှာ, ချောင်သောပစ္စည်းများကိုယူနီဖောင်းအရွယ်အစားနှင့်ပုံသဏ္withာန်ရှိသောမြင့်မားသောသိပ်သည်းဆအစိုင်အခဲလုံးထဲသို့ဖိအားပေးသည်.
4.ပြီးနောက်, အချောတောင့်ကိုအစာကျွေးခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်းအဘို့အတောင့်အအေးနှင့် Screener စက်ထဲမှာအအေးနှင့်ပြသနေသည်.
5.နောက်ဆုံးတော့, အအေးနှင့်စိစစ်မှတဆင့်, အတောင့်အစာသည်အိတ်များထဲသို့ထုပ်ပိုးနိုင်သည်.
ဒီမိုဇမ်ဘစ်ဖောက်သည်ကနေ, မိုဇမ်ဘစ်ရှိကြက်အစာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုသိရှိရသည်. အစာအာဟာရအတွက်ကြက်၏ပြောင်းလဲဝယ်လိုအားနှင့်အတူနေစဉ်, အစဉ်အလာအစာကျွေးခြင်းအမျိုးအစားသည်လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်လိုအပ်ချက်နှင့်မကိုက်ညီပါ.
ကြက်နှင့်နွားမအတွက်အဟာရမတူသောကြောင့်ဖြစ်သည်, ယခင်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ပရိုတိန်းအဘို့အမြင့်မားသောဝယ်လိုအားလိုအပ်သည်, ပရိုတိန်းဖြည့်စွက်အာဟာရအဆင့်ကိုကျော်လွန်လေ့ရှိတယ်, ဖော့စဖရပ်သည်လည်းအလားတူပင်. ပြီးပြည့်စုံသောဖော်မြူလာအစာကျွေးခြင်းတွင်နိုက်ထရိုဂျင်နှင့်ဖော့စဖရပ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ခြင်းသည် ပို၍ အရေးကြီးလာသည်။, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့အရည်အသွေးနှင့်အစာကျွေးခြင်းတန်ဖိုးကိုကျယ်ပြန့်ကွဲပြားလိမ့်မည်. ထိုအခါကွဲပြားခြားနားသောတောင်းဆိုမှုများကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်စဉ်များကိုမေးပါ. အမှန်တကယ်အခြေအနေနှင့်လိုအပ်ချက်များအရ,VICTOR PELLET MACHINE သည် 1PHT ကြက်ဘဲအစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကိုကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောတည်ဆောက်ပုံနှင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်.
စိတ်ကြိုက်ကြက်အစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၏စမ်းသပ်မှုပြေးပြီးနောက်, ရလဒ်မျှော်လင့်ထားသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုထက်ကျော်လွန်သည်, ပြီးတော့ဖောက်သည်ကငါတို့ဆီကိုဓာတ်ပုံတွေပို့ပေးခဲ့တယ်, ကြက်အစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်, ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အခြားစက်ယန္တရားများကိုလည်းသူတည်ထောင်လိုပါကြောင်း၊.